Amapeshi wamahhala, i-Gum namaLozenges - 802Quits
Ama-Vermonters NGIFUNA UKUYEKA Thola Usizo Lokuyeka Amapeshi wamahhala, i-Gum namaLozenges
IZIMPAHLA ZAMAHHALA, IZINKINZI NEZIMALI
Yonke imizamo yokuyeka ithuba lokuthola ukuthi yini okukusebenzela kangcono. Noma ngabe uyeka wedwa noma usebenza ngeQuit Coach, usebenzisa imithi yokuyeka, eyaziwa nangokuthi i-nicotine replacement therapy (NRT), ikhulisa amathuba akho okuyeka ngempumelelo. Eqinisweni, amathuba akho okuyeka akhula kakhulu lapho:
Hlanganisa imithi yokuyeka nosizo lokuyeka ukuqeqesha kusuka ku IVermont Yeka Partner or Yeka Usizo Ngocingo
Hlanganisa izindlela zokwelapha ezingena esikhundleni se-nicotine ngokusebenzisa Izinhlobo ezi-2 zokuyeka umuthi ngasikhathi sinye. Ukuhlanganisa ukwelashwa okuthatha isikhathi eside (i-patch) nokusebenza ngokushesha (i-gum noma i-lozenge) i-nicotine esikhundleni sayo kuyakhuthazwa ngamathuba amakhulu okuyeka. Funda mayelana Ukuhlanganisa Imithi Yokuyeka ngezansi.
Uma ungaphumelelanga ngenye indlela esikhathini esedlule, ungahle wenze kahle ngokuzama enye.
Vakashela ingosi ye-802Quit online uku-oda ama-nicotine patches wamahhala, i-gum & lozenges>
Funda kabanzi mayelana ne-nicotine therapy yokwelashwa yeka imithi nezinye izinketho zokuthi ungayithola kanjani>
Ulwazi kuma-Free Nicotine Patches, i-Gum & i-Lozenges neminye Imithi Yokuyeka
Umndeni osetshenziswa kakhulu wemithi yokuyeka ukwelashwa esikhundleni se-nicotine, njengamachashazi, ushingamu namaloli. Ama-802Quits ahlinzeka la MAHHALA kubantu abazama ukuyeka ugwayi bese ebahambisa ngqo ekhaya lakho. Imithi yokuyeka mahhala ifika kungakapheli izinsuku eziyi-10 yoku-oda. Ungathola ama-nicotine patches wamahhala ngaphambi kosuku lwakho lokuyeka inqobo nje uma unosuku lokuyeka phakathi kwezinsuku ezingama-30 ngaphambi kokubhalisela ukuthola izinsizakalo.
Ngaphezu koku-oda ama-nicotine patches, i-gum kanye ne-lozenges MAHHALA kuma-802Quits, umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo anganikeza ezinye izinhlobo zemithi yokuyeka. Lapho imithi isetshenziswa ndawonye, ​​ingakusiza uyeke futhi ugcine impumelelo. Khuluma nomhlinzeki wakho.
Izinhlobo Zokuyeka Imithi
Uma uke wazama enye indlela esikhathini esedlule futhi yangasebenza, cabanga ukuzama enye ukukusiza uyeke ukubhema noma olunye ugwayi.
Ungaba nemibuzo mayelana nokuyeka imithi. Imininingwane ekulesi sigaba izokusiza uqonde imikhiqizo ezokusiza uyeke ugwayi, i-e-cigarettes noma eminye imikhiqizo kagwayi.
I-Nicotine Replacement Therapy Yeka Imithi
Beka esikhunjeni. Ilungele ukukhululeka kokulangazelela okuhlala isikhathi eside. Kancane kancane ukhipha i-nicotine egazini lakho. Igama lomkhiqizo elijwayelekile yi-Nicoderm® patch.
Hlafuna ukukhipha i-nicotine. Indlela ewusizo yokunciphisa izifiso. Ikuvumela ukulawula umthamo wakho. Igama lomkhiqizo elijwayelekile yiNicorette® gum.
Kubekwe emlonyeni njengamaswidi aqinile. I-nicotine lozenges inikeza izinzuzo ezifanayo zezinsini ngaphandle kokuhlafuna.
Uma ufuna ukuyeka ngamachashazi e-nicotine kanye nensini noma ama-lozenges, kunezinketho ezi-3 zokuthi uzithola kanjani, uthola malini nokuthi kubiza malini:
1.Bhalisa ngama-802Quits bese uthola phakathi kwamasonto ama-2 no-8 ama-nicotine MAHHALA, i-PLUS gum noma ama-lozenges. Funda kabanzi.
2.Uma une-Medicaid ne-kadokotela, ungathola izinhlobo ezikhethiwe ezingenamkhawulo zama-nicotine patches kanye ne-gum noma i-lozenges noma amasonto angafika kwayi-16 wemikhiqizo engathandwa ngaphandle kwezindleko kuwe. Buza udokotela wakho imininingwane.
3.Uma unenye imishwalense yezokwelapha ungafinyelela i-NRT yamahhala noma enesaphulelo ngomuthi kadokotela. Buza udokotela wakho imininingwane.
Imithi Yokuyeka Umuthi kuphela
ICartridge enamathiselwe kokukhuluma ngomlomo. Ukuhogela kudonsa inani elithile le-nicotine.
Kungasiza ekwehliseni izifiso nezimpawu zokuhoxa, njengokukhathazeka nokucasuka. Ingasetshenziswa ngokuhlanganiswa nemikhiqizo yokwelashwa esikhundleni se-nicotine efana nezimagqabhagqabha, ushingamu kanye nama-lozenges.
Iphampu ibhodlela eliqukethe i-nicotine. Ngokufana ne-inhaler, isifutho sikhipha inani elithile le-nicotine.
Chantix incazelo yegama lokuqala® (VARENICLINE)
Kunciphisa ukuqina kwezifiso nezimpawu zokuhoxa — ayiqukethe i-nicotine. Ifunda umuzwa wenjabulo kugwayi. Akufanele ihlanganiswe neminye imithi. Uma unemithi yokudangala kanye / noma ukukhathazeka, thintana nodokotela wakho.
Izinto ezingenhla zitholakala ngemithi kadokotela kuphela. Buza ekhemisi lakho ukuthola imininingwane yezindleko. I-Medicaid ihlanganisa amasonto angama-24 kaZyban® futhi Chantix®.
Kungaba nemiphumela engemihle emithini yokuyeka. Imiphumela emibi izohluka kuye ngomuntu. Kodwa-ke, bambalwa kakhulu abantu (ngaphansi kuka-5%) okufanele bayeke ukusebenzisa imishanguzo yokuyeka ukusebenza ngenxa yemiphumela emibi.
Ukuhlanganisa Imithi Yokuyeka
Ingabe uyazibuza ukuthi imithi ingakusiza kanjani ukuthi uyeke ukubhema, ukuqhuma noma olunye ugwayi? Ngabe ucabanga i-nicotine patch vs. lozenges vs. gum? Uma kuqhathaniswa ne-turkey ebandayo, ukusebenzisa ama-patches, i-gum kanye ne-lozenges kungakhuphula kakhulu amathuba akho okuyeka ngempumelelo ugwayi. Kepha ungakhuphula izingqinamba zakho ngokwengeziwe ngokuhlanganisa izindlela zokwelapha ezingena esikhundleni se-nicotine, njenge-patch esebenza isikhathi eside enezinsini noma ama-lozenges, asebenza ngokushesha. Lokhu kusho ukuthi ungasebenzisa i-nicotine gum kanye nezimagqabhagqabha ndawonye, ​​noma ungasebenzisa ama-nicotine lozenges nama-patches ndawonye.
Kungani? Isiqephu sihambisa umfudlana ongaguquguquki we-nicotine amahora angama-24, ngakho-ke uthola ukusebenza okuthatha isikhathi eside, ukukhululeka okungaguquki ezimpawu zokuhoxa, njengokuphathwa yikhanda nokucasuka. Okwamanje, i-gum noma i-lozenge iletha inani elincane le-nicotine kungakapheli imizuzu eyi-15, ikusiza ukuphatha izimo ezinzima nokugcina umlomo wakho umatasa njengoba ukhipha izifiso.
Kusetshenziswe ndawonye, ​​isichibi nensini noma i-lozenge kunganikeza ukukhululeka okungcono kakhulu ezifisweni ze-nicotine kunalokho ezingakwenza uma kusetshenziswa wedwa.
Kungenzeka ukuthi uzohlangabezana nezimpawu zokuhoxa ngemuva nje kokuyeka ugwayi. Lezi zimpawu ziqine kakhulu emavikini amabili okuqala ngemuva kokuyeka futhi kufanele zihambe kungekudala. Izimpawu zokuhoxa zihlukile kuwo wonke umuntu. Ezinye zezinto ezivame kakhulu zifaka:
Ukuzizwa phansi noma ukudabuka
Uzizwa uthukuthele, unomsindo noma unqenqemeni
Inkinga yokucabanga kahle noma ukugxila
Ngizizwa ngingenakho ukuthula futhi ngigxumagxuma
Ukushaya kwenhliziyo kuhamba kancane
Ukwanda kwendlala noma ukuthola isisindo
Udinga Usizo Lokuyeka?
Ama-802Quits anikela ngezindlela ezintathu zokukusiza uyeke ukubhema mahhala: Ngocingo, Ebuntwini naku-Intanethi.
Usizo Lokuyeka Ukukhokhela Lwamahhala>